Home AKOTKỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ AKW FOKWỌ Ndị na-egwu egwuregwu bọọlụ Spanish Akụkọ akụkọ banyere Eric Garcia
Akụkọ ndụ anyị nke Eric Garcia na-ewetara gị ozi banyere akụkọ nwata ya, ndụ ya mbụ, nne na nna, ndị ezinaụlọ ya, akụkọ enyi nwanyị, uru nke ndụ ya.
Iji mezuo atụmanya gị, ndị otu anyị ewepụta oge ịkọwa ihe omume dị mkpa na ndụ Eric Garcia bido na nwata ka ọ bidoro mgbe ọ ghọrọ onye ama ama.
Eric Garcia's Bio- Lee ndụ nwata ya na nnukwu ịrị elu ya.
Ee, mụ na gị maarala anya ya na TV ma mara banyere ụzọ ziri ezi ya na ike ịgbachitere ya.
Agbanyeghị, ọ ga-abụrịrị na ị banyeghị ịgụ akụkọ ndụ Eric Garcia nke bụ ihe kwesịrị ịrịba ama. Ugbu a, na-ebuteghị oge ọzọ, ka anyị bido site na nwata na ezinụlọ ya.
Eric Garcia Storymụaka Akụkọ:
Maka ndị na-ebido na agụ akwụkwọ akụkọ ndụ, a na-etu ụmụ ama bọọlụ “Erico”. Eric García Martret mụrụ na 9th nke Jenụwarị 2001 na ndị mụrụ ya Mr na Mrs Garcia na mpaghara Catalonia nke Barcelona, ​​Spain.
Eric Garcia Eziokwu sitere na:
Nke mbu, azu azu bu nwa amaala mba Spain. Na mgbakwunye, nsonaazụ nke nyocha emere iji chọpụta ezinụlọ Garcia na-egosi na ọ bụ agbụrụ Catalan.
Agbụrụ ahụ na-achịkwa Eastern Spain na map dị n'okpuru ebe a na-ekwu ebe nna Eric Garcia na ikekwe nne ya si.
Ezinụlọ Eric Garcia si na mpaghara Catalan na-asụ Spain - Pinimg.
Know mara na etiti azụ tolitere na Catalonia n'akụkụ nwanne nwanyị Alicia nke obere? O toro na mpaghara, Garcia na-eto eto nwere mmasị na football site na mgbe ọ dị obere site n'aka nna ya na nne ya.
Eric Garcia Ezinụlọ Ezinụlọ:
Onye na-eto eto nwere nnukwu mmasị maka football site na nke ọma iji mee nne na nna. Ndị nne na nna Eric Garcia bụ ndị ọgaranya na-etinye ego na egwuregwu ahụ mgbe ọ bụ nwata.
N'ezie, ezinụlọ Garcia dum bụ ndị na-amasị Barcelona dị ka ọtụtụ ezinụlọ ndị Catalan.
Eric Garcia Football Akụkọ:
N'adịghị ka ọtụtụ ụmụaka ọgbọ ya, "Erico" na-eto eto dị ka aha ya bụ onye were mmasị ya maka football karịrị ikiri egwuregwu na TV ma ọ bụ na egwuregwu football.
E nyere ya ka ọ na-eme omume mgbe niile na Barcelona nwere obi ụtọ ịnakwere ya na Academylọ akwụkwọ ha mgbe ọ bụ nanị agadi 7.
Mgbe ọ nọ na agụmakwụkwọ Barca, nwatakịrị ahụ bụ nwata na-atụ n'anya nke na-egwuri egwu na nwata. Kedu ihe ọzọ, Garcia na-elekọta ndị ntorobịa ọ bụla ọ egwuri egwu.
Ọ gosipụtakwara ntozu okè nke na-enyeghị eziokwu ahụ bụ na ọ dị obere.
Ofbọchị nke onye na-eto eto na Mahadum Barcelona.
Eric Garcia Biography - Tozọ Na-ewu ewu Akụkọ:
Mgbe ihe egwuregwu bọọlụ hapụrụ ụlọ akwụkwọ Barcelona iji sonyere Manchester City na 2017, ọgba aghara sitere na ndị Fans ma tie ndị nta akụkọ banyere ọpụpụ ya.
N'ezie, ọtụtụ ndị lere nkwagharị ahụ anya dị ka ihe akaebe nke ijikwa ọchịchị nke dakwasịrị ụlọ ama ama na afọ ndị na-adịbeghị anya.
Ndị ọrụ Barca na ndị na-akwado ya enweghị obi ụtọ na onye nkụzi Garcia bụ Carles Puyol bụ onye na-arụ ọrụ dị ka onye nnọchi anya ya.
Puyol lere omume ya anya dị ka aghụghọ nke ụlọ ọgbakọ na-ahụ ya dị ka akụkọ akụkọ. N'ihi ya, ọ hapụrụ azụmahịa nke ụlọ ọrụ ma were ọrụ nkewa dị ka onye nnọchi anya La Liga na UEFA.
Eric Garcia Bio - Na-ewu Onwe Ya Akụkọ:
Mgbe ha rutere Man City, azụ azụ ahụ malitere ịme ndị otu egwuregwu mbụ maka klọb ahụ n'oge oge ọkọchị 2018.
Ọ gara n'ihu ịme egwuregwu mbụ nke Premiya mgbe ọnwa gachara na Septemba 2019 n'oge mmeri asatọ megide Watford.
Ọsọ ọsọ gaa n'oge edere Bio a, Garcia enweela ihe ịga nke ọma na nlele ya niile na mkpọsa egwuregwu Premiya.
N'ezie, o gosipụtara onwe ya nke ọma dịka onye mbụ họọrọ ụlọ Man City n'akụkụ Aymeric Laporte.
Ọ dị mma ịmara na Barcelona na-achọkarị otu esi eme ka ọ laghachi Spain. Kedu ụzọ ụzọ bọlbụ mbụ nke egwuregwu maka ya maka ọdịnihu, ndị ọzọ, dịka ha na-ekwu, ga-abụ akụkọ ntolite.
Ọnye na-bụ Eric Garcia's Girlfriend?
Kemgbe Lionel Messi mere ọganihu ya na egwuregwu ndị otu mgbe ọ dị obere, enwere uche ikwenye na n'azụ ihe ịtụnanya ọ bụla, ọ bụ enyi nwanyị na-akwado ogologo oge.
Ikpe ahụ nwere ike ọ gaghị adị iche maka Garcia bụ onye hụrụ ụkwụ ya n'oge na-adịbeghị anya na egwuregwu ndị egwuregwu mbụ.
Otú ọ dị, ọ ka ga-ekpughe enyi nwanyị ahụ ọ na-ala n'ụlọ mgbe egwuregwu ọ bụla gasịrị.
Nke a na-eme ka ọtụtụ ndị nwee obi abụọ ma ọ nwere enyi nwanyị ma ọ bụ na enyeghị ya na njikwa mgbasa ozi ya enweghị oge ọ bụla.
Na agbanyeghị, anyị maara na etiti etiti alụghị nwanyị, ọ nweghịkwa ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị n'alụghị di.
Eric Garcia Ndụ Ezinụlọ:
Ezinụlọ bụ ebe ndụ malitere maka "Erico" yana ebe ịhụnanya na-enweghị njedebe maka ya. Anyị na-ewetara gị akụkọ gbasara nna na nne Eric Garcia.
Ọzọkwa, eziokwu banyere ndị ezinụlọ ya- ụmụnne ya na ndị ikwu ya ka a ga-enweta na ngalaba a.
Banyere Eric Garcia Ndị nne na nna:
Onweghi ihe omuma banyere ndi nne na nna azu. Nke a bụ n'ihi eziokwu ahụ na ọ dịbeghị anya ọ gafere ọfụma na Manchester City.
Agbanyeghị, anyị nwere obere foto nne ya na ya na ụlọ akwụkwọ Barcelona na 2013.
Foto na-adịghị ahụkebe nke Garcia na mama ya na nwanne ya nwanyị.
Banyere Eric Garcia ibmụnne:
Dịka anyị kwurula na mbụ, etiti azụ nwere nwanne nwanyị tọrọ. Aha ya bụ Alicia. Amaghi otutu ihe banyere ya ma obu na o na-eto n'ime nwanyi mara ezigbo mma.
Studymụ ihe nlere anya nke foto dị n'okpuru ga-eme ka ị kwenye na nne na nna Eric Garcia nwere nwa nwanyị mara mma yana nwa nwoke mara mma dịka ụmụaka.
Zute nwanne nwanne Eric Garcia, Alicia.
Banyere ndị ezinụlọ Eric Garcia:
Ewezuga ndị nne na nna azụ, amachaghị ihe gbasara mgbọrọgwụ ezinụlọ ya ọkachasị dịka o metụtara nne na nna ya na nne na nna ya.
N'otu aka ahụ, ha abụghị ndekọ ọ bụla nke ndị nne na nna nwanne Garcia, nwanne nne ya na nwanne nne ya na nwanne nna ya.
Eric Garcia Ndụ Nke Onwe:
You maara na a mụrụ ya n'okpuru Capricorn Zodiac Sign ma nwee ọtụtụ àgwà onwe onye na-amasịkarị?
Ọtụtụ ndị ya na ha kwurịtara okwu kwuru na ọ dị ezigbo nkwanye ugwu, ọ bụ ezie na ọ naghị eme ihere, na ọ na-abịa karịa ka ọ dị n'ezie.
Ọnye na-bụ Eric Garcia n'èzí Football?
Ka anyị gaa na etiti laghachi na ndụ n'èzí football. Eric Garcia nwere obi ike, nyocha, dị irè ma meghee ikpughe eziokwu banyere ndụ ya na nke onwe ya.
Mgbe ọ bụla Garcia anaghị azụ ọzụzụ, enwere ike ịchọta ya na-ekiri ihe nkiri, na-eme njem, na-egwu egwuregwu vidio ma soro ndị ezinụlọ ya na ndị enyi ya nọrịa.
Ndụ Eric Garcia - Ajụjụ banyere Net Net ya:
Banyere otu etiti azụ na-eme ma na-emefu ego ya, o nwere atụmatụ ruru $ 0.5 nde n'oge edere akụkọ ndụ a.
Iyi nke akụ Garcia sitere na ụgwọ na ụgwọ ọ na-enweta site na ịgba bọlbụ elu.
Ebe a na - abata na etiti na - ewetara ego nnweta ego site na nkwenye. Dịka nke a enweghị ajụjụ gbasara etu ọ ga-esi nwee ike inweta akụ ndị dara ada dị ka ụgbọ ala mara mma na ụlọ ndị dị oke ọnụ n’ọdịnihu dịka ọ tinyelarịrị onwe ya maka nnukwu nrigbu ego na Premier League.
Eric Garcia Eziokwu:
Iji bulie etiti anyị azụ, anyị amachaghị banyere ya.
Eziokwu # 1 - forhụnanya nke Anụmanụ:
Eric Garcia buru ibu na ulo anu ulo karicha nkita. Ọ hụrụ ha n'anya ma kwanyere ha ùgwù dịka ha bụ ndị otu ya, ọ gaghị egbu oge ịkọrọ ha foto nke onwe ya na Instagram.
Hụ ụdị ụdị nke anu ulo ọ hụrụ n'anya.
Garcia ka gha enye aka banyere ihe omuma ya. Na agbanyeghị na ndị isi ahụ nwere ike ịkwado ya ịbụ onye Kristian n'ihi aha mbụ ya Eric. Nwanne ya nwanyị nwere aha Alicia nke nwere mkpọrọgwụ Ndị Kraịst.
Eziokwu # 3 - Eric Garcia's Salary Breakdown:
Kwa Afọ £ 624,000 € 693,015 $ 820,850
kwa ọnwa £ 52,000 € 57,751 $ 68,404
Kwa Izu £ 12,000 € 13,327 $ 15,785
Kwa .bọchị £ 1,709 € 1,898 $ 2,248
Kwa elekere £ 71 € 79 $ 94
Kwa Nkeji £ 1.12 € 1.32 $ 1.56
Kwa nke abụọ £ 0.01 € 0.02 $ 0.03
Nke a bụ ihe Eric Garcia
Eziokwu # 4 - Ogbenye FIFA FIFA:
Garcia nwere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ abụọ na-egwu egwuregwu bọl-elu, ihe mmepe na-akọwa ihe kpatara ya na ndị ọzọ ji nwee mmasị Ansu Fati nwere ọkwa FIFA dị ala nke 69.
Ọ bụ eziokwu amaara na oge na-agwọ ma na-akawanye mma. Ikpe a agaghị abụ ihe dị iche iche maka etiti azụ dịka o nwere ikike karịa 85 na ọbụnadị bụrụ ọkacha mma n'egwuregwu FIFA.
Ohere ịbụ otu nke kachasị mma dị ebe ahụ.
Eziokwu nke 5 - Trivia:
You maara na afọ ọmụmụ Garcia 2001 dị mkpa maka ọtụtụ teknụzụ na ihe omume ntụrụndụ? Ọ bụ afọ Wikipedia, akwụkwọ nkà ihe ọmụma n'efu nke Wiki na-aga n'ịntanetị ebe Apple Computer weputara iPod.
N'ebe ntụrụndụ, ọ bụ na 2001 na ihe nkiri dịka Shrek na mbara ala nke sinima apeshit.
Eric Garcia Biography Summary:
Aha n'uju Eric García Martret
aha otutu Erico
Ụbọchị ọmụmụ Ụbọchị 9th nke January 2001
Ebe amụrụ onye Catalonia mpaghara nke Barcelona na Spain
Egwuregwu Bido n’azụ azụ / azụ azụ
Nwanne Alicia (nwanne)
omume ntụrụndụ Ikiri ihe nkiri, njem, igwu egwuregwu vidio na isoro ezinụlọ ya na ndị enyi ya nọrịa.
Ngwakọta Net $ 0.5
elu 1.82 m
Daalụ maka iwepụta oge iji gụọ akụkọ a gbasara ndụ ndụ onye nchekwa. Eric Garcia storymụaka akụkọ mere ka anyị kwenye na talent na ịrụsi ọrụ ike na-eme ka ihe ịga nke ọma.
Na Lifebogger anyị na-anya isi na ịdebe akụkọ ndụ nke ndị egwuregwu bọọlụ dịka nke ndị Spen, nke anyị ji eziokwu na izi ezi mee.
Agbanyeghị, ọ bụrụ na ịchọtara ihe ọ bụla ga - eme ka ncheta Eric Garcia, biko kpọtụrụ anyị ma ọ bụ hapụ okwu n'okpuru.